Nin dooloow ku dhashay oo sheeganaya Muqdisho.
Maalmahaan danbe waxaan internet_ka ka akhrinnaa in nin la yiraaho DOOLOOW oo ku dhashay Dooloow in uu annaga oo ku dhalanay Muqdisho na yiraahdo isaga taga Muqdisho Muddullood ayaa iska leh.
Waxaan ognahay in magaca Muddullood loo aas aasay in xoog looga qaato beeraha iyo dhulka ay iska leeyihiin dadka aan hubeeysnayn oo beeshaas ku abtirsada. Waxaase intaas ka daran in maanta Kaaraan iyo Medina guryihii ku yaalay in ay Abgaal xoog ku haystaan iyo dhul beereedkii Balcad iyo Jowhar.
Marka waxaan u sheegi lahaa ninkaas la yiraahdo Dooloow in aniga oo Somali ah kuna dhashay Muqdisho aan uga xaq leeyahay isaga oo ku dhashay Dooloow. Doodiisa waxay la mid tahay midda Cali Beesteeynka oo yiraahdo awoowe yaasheenna ayaa ku dhashay America ee annagaa iska leh.
Waxaa kaloo jirta in Muqdisho ay mar hore ku heshiiyeen in ay kala qaybsadaan Habargidir iyo Abgaal iyagoo saxiixay heshiiskii loo yaqaanay `Khadka Cagaaran` `Green Line` 1992 oo uu goobjoogga ka ahaa James Jonah oo ka socday Qaramada Midoobay.
Muqdisho maanta waxaa ku nool ilaa 1.5 (hal malyan iyo bar)somali ah, Abgaal wuxuu ka yahay waa qiyaas 100,000 (boqol kun)oo qof, marka qof hadii uu tagayo waxaa fudud idinka in aad iska tagtiin.
Aragti: MOHAMUUD AFGOOYE IYO MOORIYAAN MAXAY KALA DUUWANYIHIIN? MOORIYAANKU WAX BUUW DHACAY AFGOOYENA WAA KHAADIGII U XALAALINAYEY... | WQ Qamar Shariif Hashiim | Posted to the Web Janaayo 07, 2002